Iwadi yindawo kwindawo kamasipala okanye umasipala wengingqi, ochaze ngokucacileyo imida. Ikomidi lewadi liyinqununu ekhethwe ngentando yesininzi emele imimandla ehlukeneyo yoluntu kwaye idibene rhoqo phantsi kosihlalo onelungu lewadi. Ii komiti zeewadi zinokuba ngamalungu angama-10 kwaye kufuneka zimele amaqela athile anomdla.
Bangaphinda banyulwe kwiindawo zendawo. IiKomiti zeewadi zidibanisa phakathi koomasipala kunye noluntu. Ii komiti zeewadi kufuneka zidibanise ubuncinane amaxesha amane ngonyaka njengoko amakhansela ewadi kufuneka abuyisele kwiiwadi zabo ngekota nganye. Kukho ezinye iimeko xa kufuneka iikomiti zewadi zidibane. Amalungu e Komiti lesigcini ayifumana ukuhlawulwa kodwa angabuyiselwa kwiindleko zesikhwama.
Izinto zokwazi malunga newadi
Iikomiti zeewadi kufuneka zidibanise ubuncinane amaxesha amane ngonyaka njengoko amakhansela ewadi kufuneka abuyisele kwiiwadi zabo ngekota nganye. Kukho ezinye iimeko xa kufuneka iikomiti zewadi zidibane. Amalungu eKomidi lesigcini ayifumana ukuhlawulwa kodwa angabuyiselwa kwiindleko zesikhwama.